July Dream: December 2011
Posted by JulyDream at 10:49 PM9comments:
ပျော်ရွှင်ဖွယ် ခရစ်စမတ် အချိန်သမယလေး ဖြစ်ပါစေဗျာ...
Wish you happy and healthy many years ahead.
Posted by JulyDream at 9:00 AM4comments:
Labels: Photo, Wishes
နှစ်သစ်ကူးခါနီးအချိန်ရောက်တိုင်း Marina Bay က ရေပြင်ကျယ်ကြီးမှာ ထုံးစံအတိုင်း တောင်းဆုချွေတဲ့ ဘောလုံးဖြူဖြူတွေ ဖွေးဖွေးလှုပ်နေပါပြီ။
ရင်ထဲက ဆန္ဒတွေ တောင်းဆုတွေ ပြည့်ဝခဲ့မယ်ဆိုရင်...
မြန်မာပြည်ကြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာ တိုးတက်ပါစေလို့ပဲ။
တကယ်ပါ... မွေးရပ်မြေလောက် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ နေရာမရှိပါဘူး။
အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါအရ ဝေးတမြေခြားကို ရောက်နေပေမယ့်
စိတ်အစဉ်က အမိမြေရဲ့ ရင်ခွင်ကိုပဲ တမ်းတလွမ်းဆွတ်နေမိတယ်။
မြန်မာပြည်ကြီးသာ ငြိမ်းချမ်းသာယာ တိုးတက်လာရင်...
အဝေးရောက်နေတဲ့ သားတွေ သမီးတွေအတွက်
အိမ်အပြန်လမ်းက ကတ္တီပါကော်ဇောနီ မခင်းထားလည်း
အလျင်အမြန် လှမ်းနေတဲ့ အပြန်ခြေလှမ်းတွေအတွက် အဆင်ပြေနေမှာပါပဲ။
Posted by JulyDream at 11:41 PM2comments:
Maria Robinson ဆိုတဲ့ စာရေးဆရာမက တခါတုန်းက ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ဘယ်သူကမှ အတိတ်ကို ပြန်သွားပြီး အသစ်တဖန် ပြန်လည်မွေးဖွားချင်လို့ မရဘူးတဲ့။ ဒါပေမယ့် အသစ်တွေကို အခုပစ္စုပ္ပန်အချိန်မှာ စတင်ပြီး အဆုံးသတ်ချင်တဲ့ ကိစ္စတွေကိုလည်း လက်စသတ်လို့ ရပါသတဲ့။ အဲဒီလိုမျိုးတွေ ဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်တဲ့အခါမှာ ရပ်သင့်တဲ့ကိစ္စတွေကို ရပ်ပစ်သင့်ပါသတဲ့။ ဘဝမှာ ဘယ်လိုအရာတွေကို ဆက်မလုပ်တော့ပဲ ရပ်တန့်ပစ်ရမယ် ဆိုတာကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ် ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်ဖတ်ဖို့ မှတ်သားထားတဲ့စာလေးတွေကို ဘလော့ဂ်မှာ ထပ်ဆင့်ဝေမျှတာပါ။ အပြည့်အစုံ အသေးစိတ် ဖတ်ချင်ရင်တော့ အောက်မှာပေးထားတဲ့ ဘလော့ဂ်လင့်ခ်မှာ သွားဖတ်လိုက်ပါခင်ဗျာ။
Read more, please go to this link.
Credit to http://www.marcandangel.com
Posted by JulyDream at 10:28 PM 1 comment:
ဒီနေ့က ညီမဝမ်းကွဲတယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်။ ညီမဝမ်းကွဲဆိုပေမယ့် အထက်အောက် ဖြစ်နေတော့ တခြားမောင်နှမတွေထက် ပိုပြီး ရင်းနှီးတယ်။ စင်္ကာပူမှာ ရှိတဲ့ အမျိုးအရင်းကလည်း လက်ချိုးရေရင် လက်ငါးချောင်းတောင် မပြည့်ဘူး။ အဲဒီတော့ သူ့မင်္ဂလာဆောင်က မတက်မဖြစ် တက်ကိုတက်ရမယ့် မင်္ဂလာဆောင်ပေါ့။ အဲဒီတော့ ချစ်ချစ်အတွက် မြန်မာဝတ်စုံလေး ချုပ်ထားဖို့ အစောကြီးကတည်းက ရန်ကုန်ရောက်တုန်းလေး စီစဉ်ခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ ဘာဝတ်ဝတ် အဆင်ပြေပါတယ်။
သူက စီတီးဟော ပင်နီဇူလားပလာဇာနားက ဟော်တယ်မှာ ဆောင်တာ။ လက်မှတ်ထိုးပွဲက မနက် ၁၁ နာရီ လုပ်မှာဆိုတော့ အိမ်ကနေ မနက် ၁၀ နာရီလောက် ထွက်ခဲ့တယ်။ သိတဲ့အတိုင်း အခုတလော စင်္ကာပူမှာ ရထားလိုင်းတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးက ရန်ကုန်မှာပေးတဲ့ လျှပ်စစ်မီးလိုပဲ မကောင်းတချက် ကောင်းတချက် ဆိုတော့ တက်စီပဲ ငှားလိုက်တယ်။ လမ်းမှာက ကားတွေ အတော်များသား။ စနေ ပိတ်ရက် ဖြစ်ပေမယ့် ကားတွေ လမ်းမှာ ပြည့်နေတယ်။ ပြည့်နေမှာပေါ့လေ... အနီလိုင်းရထားက အလုပ် မလုပ်တော့ဘူးတဲ့။ ရထားလိုင်းရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ အတော်ကို ခေါင်းကျိန်းနေလောက်ပြီ။ ရထားလိုင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာရဲ့ ဇစ်မြစ်ကို ဖော်ထုတ်ပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြန်ပြင်သွားမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ရထားလိုင်း ပျက်နေလို့ပဲလား မသိ... အတော်များများ မင်္ဂလာပွဲကို အချိန်မှီ မရောက်ကြဘူး။ တက်စီငှားပြီး လာကြပေမယ့်လည်း ကားလမ်းမှာ အိပဲ့အိပဲ့ပဲ သွားလို့ရမှာမျိုး ဖြစ်နေတာကိုး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ မင်္ဂလာပွဲကတော့ လူစည်ပါတယ်။ တအိအိနဲ့ တသုတ်ပြီး တသုတ် ရောက်လာကြတယ်။ ကျွေးမွေးဧည့်ခံတဲ့ အစားအသောက်နဲ့ နေရာထိုင်ခင်းက အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘူဖေးကျွေးတဲ့ မင်္ဂလာဆောင် ဆိုတော့လည်း တခုခု စားချင်ရင် တန်းစီရတာလေးပဲ အခက်အခဲ ရှိတာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀၁၀ နဲ့ ဒီနှစ် ၂၀၁၁ အတွင်းမှာ အမျိုးအရင်းထဲက မောင်နှမတွေ... တယောက်ပြီး တယောက် သင့်တော်ရာ အိမ်ထောင်ဘက်တွေနဲ့ အိမ်ထောင်ကျကုန်တာ ကောင်းပါတယ်။ လူပျိုသိုး အစ်ကိုတွေလည်း အိမ်ထောင်ပြုတယ်။ ငယ်သေးတဲ့ ညီမတွေလည်း အိမ်ထောင်ပြုတယ်။ အဲဒီစာရင်းထဲမှာ ကျွန်တော်လည်း ပါတာပေါ့နော်။ လူကြီးတွေဘက်က ကြည့်ရင်တော့ သူတို့ကလေးတွေ နောင်ရေးအတွက် စိတ်အေးရတာပေါ့။ လူငယ်တွေဘက်က ကြည့်ရင်လည်း... ရှေ့က စီနီယာကားတွေ တစီးပြီး တစီး... အစီစီအရီရီ အလှည့်ကျ ထွက်ကုန်တော့ နောက်ကားတွေလည်း အလှည့်ရောက်တာပေါ့။ မဟုတ်ရင် သူတို့ခမျာ ရင်တမမနဲ့ အလှည့်စောင့်နေရမယ်လေ။ အမျိုးအရင်းမှာ မောင်နှမက အတော်များသား။ အလှည့်ကျ စောင့်ရင်တောင် အတော် စောင့်ယူရမယ်။
ကဲကဲ... ကျွန်တော်က အကြီးဆိုတော့လည်း မင်္ဂလာဆုတောင်းလေးတော့ ပေးအုံးမှ...
မင်္ဂလာမောင်နှံဖြစ်တဲ့ ညီမနဲ့ ပူပူနွေးနွေး ယောက်ဖကို... သားတရာ မြေးတဖျာရတဲ့အထိ သေတပန်သက်တဆုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကြင်ကြင်နာနာ နားလည်မှူအပေါင်းနဲ့ ဆိုးတူကောင်းဖက် ပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါစေလို့... ဒီနေရာကနေ တောင်းဆုမင်္ဂလာ ပြုလိုက်ပါတယ်လေ။
Posted by JulyDream at 6:12 PM2comments:
Labels: Dedication, Living in SG, Photo